Newark ၏အတော်များများကသူတော်စင်: မိုက်ကယ် Gandolfini အဆိုပါ soprano ၏ prequel အပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom Newark ၏ "ဟုအတော်များများကသူတော်စင်: မိုက်ကယ် Gandolfini အဆိုပါ soprano ၏ prequel အပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်
၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ပြီးနောက် 20 နှစ်အဆိုပါ soprano မိုက်ကယ် Gandolfini, တိုနီ soprano ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတပ်ချသောသူဂျိမ်းစ် Gandolfini ၏သားအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတစ် prequel အဖြစ်ကို update လုပ်ဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
timeless စီးရီးငယ်မျက်နှာပြင်၏အစွန်းရောက်အနေအထားကိုအလုပ်ဝယ်ယူကြပါပြီ, အဆိုပါ soprano HBO က၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုသတ်မှတ်နှင့်အသေးစားမျက်နှာပြင်၏ရည်ညွှန်း string ကိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ လျှင် လိင်နှင့်စီးတီး (1999-2004) နှင့် Oz (1997-2003) ကိုလည်းထူထောင်ရှေးထုံးများ, အဆိုပါ soprano အားဖြင့်မှုတ်သွင်း, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရသာရှိပါတယ် သည်းထိတ်ရင်ဖို မာဖီးယားရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ပေါင်း 80 နှင့် 90 (အပူ, ဇါတ်ရုံ, Goodfellas), တစ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူ။ စီးရီးမှာတော့တိုနီ soprano မှာတစ်ချိန်ကဒေါက်တာသူ့မိသားစုကျိုးလက်မောင်း (Carmela, အငယ်တန်း, AJ, Janice, Meadow ဟာ) နှင့်တစ်ဦးကုထုံးကြည့်ဖို့ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲထဲကနေဦးဆောင်သည့် mafiosa စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျနီဖာ Melfi ။ ဒါဟာသူ့ကို5ရွှေကမ္ဘာလုံးအနိုင်ရတားဆီးမအရာအားလုံးကို, ရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးအလင်းသေံကြာသောစီးရီးတည်ဆောက်ကြောင်း, ဤသုံးပါးလှုပ်ရှားမှုများန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလထဲမှာ 2020 US မှာဖြန့်ချိ Newark ၏အတော်များများကသူတော်စင်ယင်းစီးရီးမှ prequel အဖြစ်ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ပါ။ အနက်ရောင်နဲ့အီတလီအသိုင်းအဝိုင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစဉ်ဤသည် Newark အဓိကရုဏ်းကာလအတွင်းနှစ်ပေါင်း 60 ကျော်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အလန်တေလာကစီစဥ်ညွှန်ကြား, ရုပ်ရှင်ခဲတပ် ချ. , ယာကုပ် Gandolfini မိုက်ကယ်၏သားကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဤ "ဟုသူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်အတူစတင်အဘယ်အရာကိုရယ်စရာင်ငါ၏အနားထောင်ခြင်း, ရှေ့တော်၌ငါ soprano ၏တစ်ခုတည်းဒုတိယမတွေ့မမြင်ဖူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည်စီးရီးလှည့်သောအခါငါသာကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူ, replied, ထိုအစုပေါ်ခဲ့တာကအကြောင်းကိုဘာမေးတော်မူလျှင် "အိုးကဒီကုထုံးသို့ဝင်တဲ့မာဖီးယားဂိုဏ်း၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ " ဒီအလုပ်၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့စီးရီးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ. ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဇာတ်ကောင်၏ထုံးစံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရတယ်အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်, သူ့အသံသည်အသံသြဇါငါတုံ့ပြန်ခဲ့သမျှသောအဖြစ်, အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်ကိုမြင်တော်မူ၏။ အဘယ်အရာကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်တယောက်တည်းသာဒီလိုလုပ်ဖို့ရန်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်ကိုကြည့်ငါ့အချိန်ဖြုန်းဖို့, ငါ့တိုက်ခန်းမှာတစ်ဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအရူးအိပ်မက်တွေလုပ်နေတော့တာပဲ။ ငါတဦးတည်းကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်ဒါဝိဒ်နှင့်ကြားနာနေစဉ်အတွင်း [Chase, စီးရီး၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, Ed က]ငါငါ့လက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါ့အဘ၏ကိုမြင်လျှင်။ "
ကင်မရာတွင်ကျနော်တို့ Jon Bernthal တွေ့နိုင်ပါသည် (ပြစ်ဒဏ်ကို), Vera Farmiga (အဆိုပါ Conjuring), Corey Stoll (အဆိုပါ strain), Ray Liotta (အပြာရောင်၏အရိပ်), ဆရာယောဟနျ Magaro (အဆိုပါ Umbrella အကယ်ဒမီ) သို့မဟုတျ Michela De Rossi, ငါတို့နေဆဲသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမသိရကြပေမယ့်။ မူရင်းစီးရီးဇာတ်လမ်းတွဲဒါရိုက်တာဆဌမရာသီတစ်ခုသူဟာ Emmy Award ဆု9များအတွက်ဇာတ်လမ်းတွဲဒါရိုက်တာဖြစ်ရလိမ့်မည်အနိုင်ရသူကိုအလန်တေလာ 18 ။ အဆိုပါ soprano ပြီးနောက်သူအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ အရူးယောက်ျား, Thrones ၏ဂိမ်း et Thor: The Dark ကမ္ဘာ့ဖလား.
HBO 1 ဘီလျံခန့်သည် Big Bang အဖွဲ့သီအိုရီအခွင့်အရေးများဆည်းပူးဖို့လိုလား
Netflix: The Dark Crystal များအတွက်ပထမဦးဆုံးအနောက်တွဲယာဉ်: Resistance ၏ခေတ်
အံ့ဩခြင်းရုပ်မြင်သံကြား: Jeph Loeb အားဖြင့် evoked အနာဂတ်စီးရီး
Facebook မှာလည်းလူသားသင်၏ audio ပြောဆိုမှုများကိုနားထောင်ခဲ့ဘူး